नेपाली जनताहरु स्वार्थी, सत्ताका पुजारी र दही चिउरे - Seto Page Seto Page
काठमाडौं । नेपाली जनताहरु सत्ताका पुजारी, दहीचिउरे, ताक परे तिवारी नत्र गोतामे जस्ता अवसरवादी र स्वार्थी छन । तुलना गर्दा को ठिक र को बेठीक मुल्यांकन गर्न नसक्ने नेपाली जनताहरु छन ।
मासु भात, रक्सी र भत्तामा बिकाउ छन । मुलुकको अस्मितालाई छोडी दिउँ । बेच्न पाए भने आफ्नो आमा, छोरी , बेटी र दिदिबहिनीहरु लाई समेतलाई बेच्न पछि पर्दैनन । के वास्तविक रूपमा विक्रम सम्वत २०६२/०६३ सालपछि मुलुकले पाउनुपर्ने निकास पाएको छ ? मुलुकलाई आजको अवस्था सम्म ल्याउन जिम्मेवार र दोषीहरु नै नेपाली नागरिकहरु हुन ।
नेपाली नागरिकहरु ताक परे तिवारी नत्र गोतामे जस्ता स्वार्थी र अवसरवादी छन । विक्रम सम्वत २०६२/०६३ साल बाट आजसम्म समीक्षा गर्दा मुलुकमा नेताहरू नै निरंकुश हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको अवस्था छ ।
नेताहरूको तुलनामा राजा ज्ञानेन्द्र शाह त्यागी हुन राजगद्दी त्याग गरे । यसकारण अब राजा ज्ञानेन्द्र शाह र सेनाहरु मिली मुलुकको कार्यभार संभाल्नुपर्छ ।
अन्तर आत्मालाई साक्षी राखी वास्तविक रूपमा साच्चिकै भन्नुपर्दा विक्रम सम्वत २०६२/०६३ सालपछि मुलुकले निकास पायो सोच विचार र मनन गरौं ? यसकारण अब राजा ज्ञानेन्द्र शाह र सेनाहरु मिली मुलुकको कार्यभार सम्भाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । राकेश कुमार शर्मा